Faahfaahin Dheeriya Dagaaladda ka socda Puntland (Sawiro) – Hornafrik Media Network
Dagaal xooggan ayaa wali ka soconaya Deegaanka Af Urur ee Duleedka Boosaaso. halkaas oo ay isku haystaan Maleeshiyaad Alshabaab ka tirsan oo ka yimid Buuraha Galgala iyo Ciidamo Puntland ah oo gurmad uga baxay Boosaaso. kadib markii ay la wareegeen Alshabaab gabi ahaanba Saldhig Milatari oo ay halkaasi ku lahaayeen Puntland.
Dagaalkan oo dambe oo qarxay Duhurnimaddii Maanta ayaa hadda la iskula gabal dhacsanayaa. Waxaana uu Dagaalka xoogiisa ka socdaa Af Urur iyo dhulka ku teedsan ee Buuraladayda Galgala.
Degaanka lagu dagaallamayo ee Af Urur oo ay Saldhig Milatari ku lahaayeen Ciidamadda Puntland ayeey Saaka Waabarigii Dagaal ku qaadeen Maleeshiyaad aad u hubaysan oo Alshabaab ka tirsan. Waxaana inta la og yahay ku dhintay Weerarkaasi 50 Askari oo ka tirsan oo Daraawiishta Puntland iyo 10 Shacab ah.
Korneyl Axmed Muuse Sangal, oo ahaa taliyihii aagga dagaalka uu ka socdo iyo 20 askari ayaa la gowracay, sida ay ilo lagu kalsoon yahay ay u xaqiijiyeen hornafrik. Waxaa sidoo kale ku jira Dadka dhintay saddex sarkaal oo ka tirsan ciidamada daraawiishta ee Puntland.
dhinaca Alshabaab ayaa waxaa jira iyana dhinacooda Khasaaro dhimasho iyo Dhaawacba leh oo soo gaaray. waxayna Wararka hordhaca ah sheegayaan in la arkayay Maydadka illaa iyo 20 Maleeshiyaad Alshabaab oo ay ku jiraan Ajaaniib.
Al-shabaab ayaa baraha ay ku leeyihiin Internetka waxay ku sheegteen iney dileen 61 kamid ah ciidamada Puntland, kuwo kalena ay dhaawaceen.
Guddoomiyaha Gobolka Bari Yuusuf Maxamed Waceys Dhedo ayaa isna dhinacooda u sheegay Wakaalada wararka ee Reuters Al-Shabaab ay la wareegeen deegaanka Af Urur. isla markaana ay haatan wadaan dadaalo ay dib ugu xoraynayaan Deegaankaasi.
Wasiirka Wasaaradda Amniga ee Maamulka Puntland Cabdi Xersi Cali Qarjaboo shir jaraa’id uqabtay saxaafadda ayaa faah faahin ka bixiyay dagaalkii ka dhacay Deegaanka Af urur ee Gobalka Bari waxa uuna sheegay in dad rayid ah halkaasi lagu dhameeyay.
Wasiir Qarjab ayaa sheegay in dadka halkaasi lagu laayay ay ka badan yihiin 50 qof dhamaantoodna ay ahaayeen dad rayid ah sida uu hadalka u dhigay.
Waxa uu sheegay in ay Al-shabaab dilayn in kabadan 50 oo isugu jira Caruur, Haween iyo Dad kale oo waayeello ah oo dhamaantoodba ahaa dad rayid oo aysan jirin wax qasaara ah oo puntland ka soo gaaray dagaalkaasi.
“waxaan idin cadeynayaa in dadka halkaasi lugu laayay ay haayeen dad rayid ah sida caruur,Haween, Waayeello iyo dad kale ma jirto wax qasaara ah oo ciidan kayna soo gaara” ayuu yiri wasiir qarjab.
Dhaawacyo u badan Askarta Puntland iyo Dad Shacab ah ayaa la gaarsiiyay Isbitaalka Carmo. waxayna Dhaqaatiirta Isbitaalka oo Hornafrik ay la xiriirtay ay u xaqiijiyeen in la soo gaarsiiyay 30 Dhaawacyo ah oo qaarkood ay culus tahay xaaladooda.
Wali waxaa jira Dhaawacyo iyo Maydad ku jira Aagaga lagu dagaalamay. waxaana suuragal ah in Khasaaruhu intaas ka bato.